VaKabila Votumira Nhumwa kuZimbabwe Kunonzwa Nhaurirano Dzoramba Kupera
Chivabvu 07, 2010
Sachigaro weSADC, uye vari mutungamiri weDemocratic Republic of Congo, VaJoesph Kabila, vatumira nhumwa yavo kuZimbabwe semunongedzo wekuti vatungamiri venyika dzemuSADC, vave kuneta nenyaya yekunetsana kuri kuitika muhurumende yemubatanidzwa.
Kunyange SADC yakange yati mutongi gava panyaya yeZimbabwe, uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, nevatungimiri vemapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa vange vapeta zviri kunetsa muna Zvita, kusvika pari zvino hapana chati chaitwa chinobatika.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kunetsana nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamusoro penyaya yekugadzwa kwagavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, pamwe nemuchuchis wehurumende, VaJohannes Tomana, naVaMugabe vasina kutaurirana naVaTsvangirai sezvinodiwa neGPA.
Nhumwa yaVaKabila, VaLeon Jean Ilunga Ngandu, ndivo vanoona nezvemabasa eSADC. VaNgandu, vachibatsirwa naVaMawapanga Mwana Nanga, mumiriri weDRC muZimbabwe, vakasangana nemunyori mukuru muMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, aVaTendai Biti. Vakasanganawo negurukuta rezvemitemo, uye vachitungamira Zanu PF munhaurirano, VaPatrick Chinamasa.
NeChishanu vakaita hurukuro naVaWelshman Ncube vechikwata chaArthur VaMutambara vachida kunzwa kuti chii chiri kupa kuti misariridzwa yemuGlobal Political Agreement, GPA, isapere.
VaBiti vaudza Studio7 kuti vakasangana naVaNgandu vakataura kuti hapana chati chafamba pamisariridzwa yeGPA. Vatiwo zvakakosha kuti kana pasina chabuda, ngapaitwe sarudzo.
Mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vatsinhira pfungwa dzaVaBiti kuti kana zvaramba ngapaitwe sarudzo.
Ukuwo VaMutambara vaudza Studio7 kuti zvekuti paitwe sarudzo handi pfungwa yakanaka.